Xarunta Xuquuqal Insaanka Oo Walaac Xooggan Ka Muujisay Xaaladda Xorriyada Hadalka Somaliland. – somalilandtoday.com
Xarunta Xuquuqal Insaanka Oo Walaac Xooggan Ka Muujisay Xaaladda Xorriyada Hadalka Somaliland.
axa xildhibaanka la horkeenay Maxkamadda Gobolka Hargeysa 10 May. Maxkamaddu way diiday inu rumaan garayso iyada oo sheegtay in xasaanaddu ay u diidayso. Gudida Joogtada ah ee Golaha Wakiiladu waxay diideen codsi lagu dalbay in laga qaado xildhibaanka xasaanadda, waxaayna u soo jeediyeen dawlada inay xildhibaanka xorriyadiisa u soo celiso.
Qodobka 79aad ee dastuurku wuxuu sidoo kale dhigayaa xubin ka tirsan Baarlamaanka aan “lama hor geyn karo maxkamad,loomana gudbin karo xabsi, ilaa xubinta ama xubnaha laga xayuubiyo dhawr-sanaanta xilka ay ummadda u hayaan.” Maamuuska waxa Goluhu kaga xayuubin karaan xildhibaanka “saddex meelood laba ahaan tirada guud ee Golaha.” “Haddii aanu Goluhu fadhiyin, waxa waajib ah in oggolaanshaha tallaabada laga qaadayo xubinta laga helo Guddida Joogtada ah ee Golaha Wakiilada,” sida ku cad qodobka 49 ee Dastuurka. Dacwadda la xidhiidha xildhibaan Dhakool way diiday Gudida Joogtada ah ee Golaha Wakiiladu in laga qaado maamuuska.
13kii May 2019, Booliiska Laascaanood waxaay xidheen Cabdiraxmaan Kayse Maxamed oo ah suxufi ka tirsan Bulsho TV. Markii la xidhayay suxufiga waxa dhaawac soo gaadhsiiyay filidhxabad askari booliis ahi dhulka ugu dhuftay. Suxufigan waxa lagu xidhay waraysiyo uu ka qaaday dad reer Laascaanood ah oo ka hadlay xadhiga Xildhibaan Dhakool.